Nambarada Taleefanka Hyperlink ee leh Calaamadaha barroosinka
Sida Loogu Xidhiidhiyo Nambarada Taleefoonka ee Tag Barroosin
Talaado, Agoosto 24, 2010 Arbacada, Janaayo 26, 2022 Douglas Karr
Saaxiibbaday ayaa tallaabo ka qaadi doona tan, maadaama aan marar dhif ah ka jawaabo taleefankayga… laakiin hey… tani waxay ku saabsan tahay caawinta aad shirkad, ma kayga! Iyada oo kor u kaca weyn ee iPhones, Android iyo talefannada kale ee casriga ah, runtii waa waqtigii aad bilaabi lahayd hagaajinta goobtaada si loogu isticmaalo browserka mobaylka.
Shirkaduhu waxay arkayaan qayb muhiim ah oo ka mid ah booqdayaashooda oo ku imanaya aaladaha mobilada. Lahaanshaha shabakad jawaab celin ah oo u muuqata mid ku habboon aaladda moobaylka hadda ma aha ikhtiyaar, waa lama huraan.
Waa kan hal shay oo inta badan la iska indho tiro marka la dhisayo khibradda moobilka… hyperlinking nambarada telefoonkaaga si dadka isticmaala mobiladu ay si fudud iyaga u gujin karaan oo ay u bilaabi karaan wicitaan taleefan. Qaamuusku waa iska fudud yahay:
A caadiga ah tag barroosinka iyada oo isku xirka shabakadu adeegsado URL-ka qiimaha, xiriir email ayaa adeegsanaya mailtoYnta Qaaciddada lambarka taleefanka waa mid fudud sida. Waxaan tijaabiyay qiimaha leh iyo la'aanteed jaantusyada, caadada iyo dashes wax walbana waxay u muuqdaan inay ku shaqeeyaan iPhone iyo Droid labadaba. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku talinayaa in lagu daro koodka waddanka lambarka taleefanka oo laga saaro dhammaan xariiqyada, meelaha bannaan, ama dhibcaha qiimaha href.
Haddii aad jeceshahay inaad cabbirto inta qof ee gujinaya xiriiriyeyaashan, waxaad akhrin kartaa maqaalkeena sida loo sameeyo ku dar Dhacdada Google Analytics adoo isticmaalaya Google Tag Manager.
Tags: telfoonlambar HTML ah lambarka taleefankahtml xiriiriye taleefanXiriirinta lambarka taleefanka htmlhtml taleefoonkahtml khadka taleefankalambarka taleefanka ee hyperlinklambarrada taleefanka ee hyperlinklambarka taleefanka iphone lambarkaxiriir lambarka taleefankaisku xirka wareega wareegaxiriirka mobiladasumadda lambarkaxiriir telefoonka htmllambarka taleefanka xiriiriyalambarka taleefanka xiriir htmltaleefoonkasumadaha taleefankasumadda taleefanka gacantataleefoonka gacantaCalaamadee lambarka taleefanka gacantacalaamadee taleefannada gacantataleefoon lambarlambar taleefan sumadaysantel xiriir html
Genius Doug! Qorsheyso inaad ku bilowdo inaad ku isticmaasho dhammaan boggaga macmiilkayga. Waa hagaag haddii aan tan ku dhajiyo barteyda? Dabcan waxaan ku siinayaa qoraa buuxa. Aad u qabow! 😎
Sep 6, 2010 at 11: 37 PM
Markaa ma jiraan wax sabab ah oo AAN u gelin karin qawska, caadada, ama jajab lambarka taleefanka? Oo lambarka taleefanka html miyuu u dhaqmaa sida sumadda cinwaanka? Ma jirtaa wax faa iido ah oo SEO ah oo ku saabsan sameynta calaamadda cinwaanka gudaha href code?
@edeckers Heerarka RFC3966 uma muuqato inay taageerto qaynuunka laakiin waxay taageertaa tan xulashooyin kale iyo astaamo loogu talagalay wicitaanka caalamiga ah, kordhinta, iwm.
Sida SEO, anigu ma arko sababta aan u! Waxaa laga yaabaa in magaca ganacsiga + "lambarka taleefanka" uu noqon karo hab wanaagsan oo lagu hirgaliyo!
In Naqshadaynta Guryaha
Haye, taasi waa xeelad qabow laakiin tan waan isku dayey Firefox-na waxay i siisay farriin khaldan oo fool xun aniga oo leh ma garanayo sida loo akhriyo isku xidhka. Aniga ahaan, iima qalanto farriin qalad foolxun markii qof uu ku xidho isku xidhka dusha desktop-ka kaliya inuu haysto taleefanka gacanta oo awood u yeelan kara inuu marinka ka helo. “War-dheer-riix” lambarka taleefanka ee ku yaal Android waxayna si otomaatig ah isugu dayeysaa inay wacdo lambar had iyo jeer. Miyaan khaldanahay? Ma jiraa shaqo agagaarka ah?
Nov 26, 2011 saacadu markay tahay 9:02 PM
Xaqiiqdii waxaa loogu talagalay macaamiisha moobiilka, In House.
Agoosto 28, 2013 saacaddu markay ahayd 2:46 PM
Had iyo jeer waad iska ilaalin kartaa taas adoo ogaanaya biraawsarka. Ku rid shaashad qarsoon oo loogu talagalay daalacayaasha moobiillada / xallinta ballaadhan.
Waad ku mahadsantahay tixraacahan tixraaca Doug :)
Jun 14, 2011 saacadu markay ahayd 11:20 AM
Aad baad u mahadsantahay. fudud sidaad u sheegtay, haddana waxtar leh. Waxaad tagi kartaa dhowr talaabo oo dheeri ah waxaadna kadhigi kartaa isku xirnaanta astaanta oo aad ka sameysan kartaa cinwaan cinwaanka taaga si aad u muujiso lambarkaaga taleefanka iyo tilmaamo dheeri ah oo loogu talagalay dadka isticmaala kuwa jiirka ka dul wareegaya astaanta. Mar labaad mahadsanid!
sidoo kale ma ku dari karnaa qoraalka lambarka taleefanka hyperlink?
Sep 28, 2011 at 4: 11 PM
Waxaan rumeysanahay in doorsoomaha href uu kaliya u oggol yahay lambarrada ... hase yeeshe, waxaad ku ridi kartaa qoraal kasta oo aad rabto intaad ku dhex laaban lahayd barroosinka laftiisa.
Tani waa xeelad weyn! Waxaan bilaabayaa inaan ku daro tan hada wixii ka dambeeya. Mahadsanid!
Jan 22, 2013 saacadu markay ahayd 12:05 PM
Ma hubo 100% (oo waan ogahay in tani ay tahay dood hore oo qurux badan sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaysan tani soo noolaanayn) laakiin taleefannada casriga ah badankood maalmahan si otomaatig ah uma sameeyaan hadda?
Jan 22, 2013 saacadu markay ahayd 1:37 PM
@ facebook-502306174: disqus badan ayaa sameeya, laakiin qaar badan ayaa waliba qaab khaldan u sameeya lambarka si aanad u qeexin mooyee.
Nov 19, 2013 at 9: 21 AM
Kaliya sixitaan fudud… waxaad tiri waxaad kugula talineysaa "inaan wax walba ku hayno laakiin nambarada dhabta ah QIIMAHA Href"
Waan hubaa inaad ula jeedo "wax walba hayso laakiin nambarada dhabta ah KAGA YIMAADA qiimaha href"
Ama haddii kale waxaad wici lahayd farabadan xarakayn 🙂
Jul 24, 2015 markay ahayd 7:37 AM
Mahadsanid Douglas, Maxay tahay Bar-baraha Bulshada ee aad isticmaaleysid? Balooggaagu wuxuu umuuqdaa mid hagaagsan waxaadna haysaa waxyaabo badan oo wanaagsan. Ma jeclaan lahayd inaad ku xirmaan Google Plus. Mar labaad mahadsanid
Jul 24, 2015 markay tahay 11:04 PM
Mahadsanid Dean! In badan ka dib markaan raadiyay hareeraha shabakada si aan u helo xal weyn, ayaan ku degay Shareaholic. Waxay leedahay astaamo tan oo badan oo aynaan adeegsan - laakiin waa mid aad u jilicsan!
Agoosto 14, 2015 saacaddu markay ahayd 3:49 PM
Wali kama aqaan tiirkan, sida loo diro lambarka taleefanka - taleefanka gacanta, markaa madaxeygu wuu garaaci karaa oo wici karaa.
Agoosto 15, 2015 saacaddu markay ahayd 4:21 PM
Hi Dee, barnaamijka email-kaaga wuxuu u baahan lahaa inuu taageero HTML iyo awoodda lagu daro hyperlink-ka aan kor ku sharaxnay. Maqaalkani wuxuu ku saabsanaa sida loo sameeyo tan bogga mobilada, ma ahayn emayl.
Oktoobar 5, 2015 at 4:11 PM
Nabadoon Douglas, sidee ugu shaqeysaa wicitaannada caalamiga ah? Ma kula tahay inay fiicantahay in la isticmaalo lambar caalami ah (tusaale. + 44), ama nambarka maxalliga ah?
Si aan daacad u ahaado, Ben, waxaan aaminsanahay inay u shaqeyso si bilaa cillad ah. Waxaan aaminsanahay in wicitaano badan oo caalami ah ay isticmaalaan xeerarka aagagga. Farshaxanno fadeexad sameeya Nigeria ayaa isla markiiba maskaxda ku soo dhaca. 🙂
Oktoobar 20, 2015 at 7:32 PM
Haye, Hashag ma loo isticmaali karaa sidii hyperlink si loo bilaabo wicitaan taleefan? Waxaan maqlay maalin dhaweyd la sheegay laakiin ma arag. Mahadsanid!
Oktoobar 20, 2015 at 10:51 PM
Weli ma arkin tan. Waxaan u maleynayaa inaad qori karto nooc ka mid ah plugin ama qoraal, laakiin maahan wax shaqo HTML ah.
Oktoobar 23, 2015 at 12:46 AM
Sideen ugu abuuri karaa badhanka "wicitaan hada" barnaamijka suuq geynta emaylka sida Microsoft Publisher? Sidoo kale sidee baan ugu ridi karaa mailchimp?
Nov 4, 2015 saacadu markay tahay 12:07 PM
Marka uma baahni inaan ku daro - ama. inta udhaxeysa tirooyinka? Sidoo kale, sidee ayaad ugu dari lahayd kordhin si hyperlinkku si toos ah ugu yeero kordhinta?
Nov 4, 2015 saacadu markay tahay 4:17 PM
Qiimaha href gudahiisa, ma rabto wax jajab ah ama dhibco u dhexeeya tirooyinka. Qoraalka barroosinka gudahiisa, waxaad ku qori kartaa wax kasta.
Maqaal weyn - waxtar badan. Mahadsanid!
Agoosto 2, 2016 saacaddu markay ahayd 10:59 PM
Mahadsanid Douglas, Waad ku mahadsan tahay wax badan wadaagista lambarkan.
Tilmaam weyn Doug! Mahadsanid. Maqaalkani waa ka khuseeyaa, 6 sano kadib waxkastoo socda.
Way shaqaysaa !! Mahad Doug !! 😉
Nov 17, 2017 saacadu markay tahay 10:20 PM
Waad ku mahadsan tahay kaalmadaada!
Jan 2, 2019 saacadu markay ahayd 4:06 PM
Cashar barasho oo aad uheli badan! Dhab ahaan, waxaan jeclahay qaabka ah "guji si aad u wacdo wijidka" halkii aan ka fiicnaan lahaa "lambarka taleefanka la riixi karo". Markii aan isku dayay sheyga 'Callback Tracker plugin' ee boggeyga, waxaan ku arkaa natiijooyin badan oo dheeri ah oo leh awood u yeerida hoggaankayga, halkii ay iga yeeri lahaayeen. Shakhsi ahaan, waxaan u arkaa inay tahay lagama maarmaan bogagga badankood. Waa kuwan iskuxiraha plugin https://callbacktracker.com/plugins/wordpress-click-to-call-plugin-install-tutorial/
Agoosto 6, 2019 saacaddu markay ahayd 1:08 PM
Aad u qabow, waad ku mahadsan tahay wadaagista!